မဲခေါင်ဒေသရှိအမျိုးသမီးများ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်များ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၊ ရယူခြင်းမှ မည်သည့်အရာများက ဟန့်တားထားပါသလဲ။
သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် မဲခေါင်ဒေသအမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှု အနေအထား။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့ရှိ အမျိုးသမီး များ၏ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမှီရယူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အဟန့်အတားများကို သိရှိ နားလည်စေရန်အားထုတ်ခြင်း။
ဓာတ်ပုံMimi Thian on Unsplash. ဖော်ပြပါ လင့်တွင် လိုင်စင်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ နိုင်ပါသည်။ Unsplash.
ကျား/မ အကြားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မညီမျှမှုများက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝအခြေအနေကိုမီးမောင်းထိုးပြလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ မညီမျှမှုများက မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများ (ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ) (CLMV) ရှိအမျိုးသမီးများ၏ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမီရယူပိုင်ခွင့်များအပေါ် မည်သို့မည်ပုံ သက်ရောက်လျက်ရှိသည်ကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပွင့်လင်းသတင်း အချက်အလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကနဦးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပစ်မှတ်ထား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာဆန်းစစ် မှုတစ်ရပ်ကို (၂၀၁၉) အတွင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့၍ လေ့လာတွေ့ရှိမှုရလာဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မဲခေါင် ဒေသ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Mekong Platform တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာကို မြန်မာ ဘာသာဖြင့် များမကြာမီ ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ CLMV လေးနိုင်ငံ သည်တစ်နိုင်ငံခြင်း သီးခြားတည်ရှိနေသော်လည်း အဆိုပါနိုင်ငံများရှိ အမျိုးသမီးများသည် တူညီသော အဟန့်အတားများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လျက်ရှိကြပါသည်။ ၎င်းအဟန့်အတားများမှာ
(၁) သတင်းအချက်အလက်များ လက်လှမ်းမှီရယူပိုင်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများအားနည်းနေခြင်း
(၂) နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်လျက်ရှိပြီး ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်သေးသည့် ကျား/မ ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်း များ
(၃) ခိုင်မာအားကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် လွှမ်းခြုံပါဝင်မှုကင်းမဲ့နေခြင်း
ဒေသဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာနှင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းအရာအနှစ်ချုပ်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာပိုင်ဆိုင်သည့် မိသားစုများ၌ အမျိုးသားများ (အိမ်ထောင်ဦးစီးနှင့် သားများ) သည် အင်တာနက်ရယူ အသုံးပြုခွင့်ကို ဦးစားပေးရရှိလေ့ရှိကြပါသည်။”
ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးခဲ့သောအမျိုးသမီးများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် ၎င်းတို့ မည်သို့ မည်ပုံဖြစ်သင့်သည်၊ မည်သို့မည်ပုံတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်သင့်သည်၊ မည်သို့မည်ပုံ ပြုမူသင့်သည် ဟူသည့် ကျား/မ ဆိုင်ရာမျှော်မှန်းထားချက်များ၏ ပုံသွင်းထားချက်အောက်တွင် ရှင်သန်နေထိုင် နေရသည်ဟူ သည့်အချက် ကို ထင်ရှားတွေ့မြင်ရပါသည်။ အဆိုပါအချက်သည် သတင်းအချက် အလက်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု၊ ခေတ်မှီကိရိယာနည်းပညာများ စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများလက်လှမ်းမှီရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းအားလုံးနီးပါးတွင် ကြီးမားသည့် အရင်းခံအကြောင်းတရားအဖြစ် နောက်ကွယ်မှ ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်း များသည် အခြား မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ၊ လူမှု စီးပွါးဆိုင်ရာ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အဟန့် အတားများ ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာသည့်အဖြစ်တွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဏမှပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဆုံ၊ မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အမျိုးသမီးအများစုသည် မြို့ပြဒေသတွင် နေထိုင် ကြသည့် ပညာတတ်များဖြစ်ကြသည့်အပြင် သတင်းအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု၊ ရယူ ပုံနှင့် ၎င်း(သတင်းအချက်အလက်) တို့၏အရေးပါမှုကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်နိုင်ခြေ အမြင့်ဆုံးဖြစ် ကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသများတွင်မူ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ရုပ်ဝထ္ထုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ကင်းမဲ့ခြင်းက (အမျိုး သမီးများ သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်ကင်းဝေးရသည့်) အခက်အခဲကို ပိုမိုကြီးမားစေပါသည်။ ထို့အပြင် (ကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစီအစဉ်များသည်) (အမျိုးသမီးများ) သတင်း အချက် အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများကို ကန့်သတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အလေ့အထနှင့် (အမျိုးသမီး) များစွာပါဝင်လေ့မရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်ဂေဟစနစ်တို့နှင့် ကောင်းစွာ လိုက်လျောညီထွေမရှိသေးသည့် အဖြစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုနိုင်စေရန်စီစဉ်ထားပါက လက်လှမ်းမှီရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ရယူနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် သတင်းအချက်များကိုပင်လျင် CLMV နိုင်ငံများရှိ ပြည်သူများအတွက် လက်လှမ်းမီ ရယူနိုင်ရန်မလွယ်ကူလှပါ။ ဘာသာစကားကွာဟမှုက ထိုသို့သတင်း အချက်အလက်များ လက်လှမ်းမှီရယူနိုင်ရန်မလွယ်ကူခြင်း၏ ဥပမာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
“အကယ်၍ သင်သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို နားလည်တတ်မြောက်ပါက ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးသည် သင့်အတွက်တံခါးဖွင့် ထားသော်လည်း သင်သည် ခမာ (Khmer) ဘာသာစကား တစ်မျိုးတည်းသာ တတ်မြောက်ပါက သင်၏ (အခွင့်အလမ်းနှင့်အလားအလာတို့သည်) အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောအကန့် အသတ်ဖြင့်သာရှိပေလိမ့်မည်။” ကမ္ဘောဒီးယား
ဖော်ပြပါ စနစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် (ပြသနာ) များကို အလွယ်တကူပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။ ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ မူများ၊ စည်းမျဉ်းများကလည်း ပြသနာရပ်အားလုံးကို ကုစား နိုင်ရန် မလွယ်ကူပါ။ ကျား/မ တန်းတူညီမျှရှိစေရန် ဦးတည်သည့် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ရာ တွင် သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခင်းအကျင်းများထက်သာလွန်သည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတွေး အမြင်များ၊ ကျား/မ အားလုံးတန်းတူညီမျှစွာ ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဇောက်ချတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှု တို့အထူး လိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ (သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက် အအုံများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကို ကျား/မ မရွေး အားလုံးတစ်ပြေးညီ ရယူအသုံးပြုခွင့် ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်၊ ဖြေရှင်းမှုတို့သည် အထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျား/ မ မရွေးတန်းတူညီမျှစွာ သတင်းအချက်အလက် မျှဝေရယူ နိုင်မှု၊ လိုအပ်သည့် နည်း ပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ လက်လှမ်းမှီ၊ ရရှိ၊ သုံးစွဲနိုင်မှု စသည့် စနစ်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတို့သည် အမျိုးသမီးများနှင့် ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်ကဏ္ဏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အထူးပင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားနှင့် စာလုံးပုံစံ (Formats) မျိုးစုံအသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် ကျား/မ မရွေး (ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဏတွင်) တန်းတူညီမျှစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ထိရောက်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း ၊ အပယ်ခံလူမျိုးစုများအနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များ စုဆောင်း၊ ရယူ၊ သိမ်းဆည်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်များ ရရှိစေရန်ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် ခြင်း စသည်တို့ပြုလုပ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
မဲခေါင်ဒေသအမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရာတွင် လိုအပ် သည့် မှန်ကန်၊ တိကျ၊ ယုံကြည်၊ စိတ်ချ၊ အားကိုးနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များ လိုအပ် (အလိုရှိ) နေပါသည်။ မဲခေါင်ဒေသအတွင်း ကျား/မ မရွေး သာတူညီမျှသည့် သတင်းအချက်အလက် ရယူနိုင်ခွင့် အခင်းအကျင်း/ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရာတွင် အထောက် အပံ့တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ (မဲခေါင်ဒေသ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကနဦး အစီအစဉ်အတွက်ပြုလုပ်သည့်) ဒေသတွင်းအမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံ၊ ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်းမှု သုတေသန စစ်တမ်းမှ ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်သည့်အစီရင်ခံစာကို အောက်ပါလင့်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။